NATIIJO: Banaadir iyo Putland oo is mari waayay +SAWIRRO – Gool FM
NATIIJO: Banaadir iyo Putland oo is mari waayay +SAWIRRO
jilacow July 19, 2016
(Muqdisho) 19 Luulyo 2016. Maamul goboleedka Putland ayaa bar baro la dhaafi waayay Banaadir kullankii xiisaha badnaa ee galabta ka dhacay garoonka Koonis.
Ciyaarta ayaa aheyd mid aad u xiiso badan waxaana qeybtii hore ee kullanka uu kusoo dhamaaday 1-0, oo ay ku hor kaceyso Putland, waxaana u dhaliyay xiddiga daafaca bıdıx ee C/laahi C/qaadir Gacma.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa xiddigaha gobolka Banaadir waxa ay la yimaadeen goolkii bar baraha waxaana u dhaliyay xiddiga weerarka ee Axmed C/qaadir Shariif Buush isagoo ciyaarta ka dhigay 1-1.
Daqiiqado yar kaddib xiddiga Faarax Daahir Faarax oo ka tirsan Putland ayaa hoggaanka usoo celiyay waxaana uu ka dhigay 2-1, balse Buush ayaa markale shabaqa soo taabtay isagoo dhaliyay goolkii bar baraha waxaana kullanka uu kusoo dhamaaday 2-2.
Sikastaba gobolka Banaadir ayaa farqiga goolasha ugu soo baxday kaalinta koowaad guruubka A, halka Putland ay kusoo baxday kaalinta labaad.
Juan Cuadrado oo dib ugu soo laabtay Chelsea....(Sidee u muuqaneysaa shaxda Blues oo lagu daray Cuadrado?)
Tiki-Taka-dii Puntland, Ruuxiiyadii Banaadir iyo taageereyaal la ciir ciirkii Koonis....Ka bogo shan wax yaabood oo laga bartay ilaa iyo hada tartanka dawlad gobolleedyada Soomaaliya